Momba anay - SLAIR
Ao amin'ny 1992, ny pneumatic Goods Co. Ningbo Xinxing, ny orinasa no mpamokatra sy mpanondrana matihanina indrindra amin'ny fitaovan'ny rivotra izay azo ampiasaina amin'ny famokarana fiara amin'ny famokarana, fanodinana, polisy, fivoriana, famenoana ary indostrian'ny hazavana hafa.
Xinxing dia nahazo ny certification ISO-9001 hatramin'ny fanambarana 2004 sy CE hatramin'ny 2006. Hatramin'ny 2007, Xinxing dia manana marika manokana ho an'i Xinxing sy SLAIR. Xinxing dia mijoro ho an'ny fitaovan'ny fitaovana DIY miaraka amin'ny kalitao sy ny vidiny ambany. SLAIR dia mijoro fitaovam-piofanana matihanina amin'ny kalitao avo lenta sy vidiny lafo. Ireo marika roa ireo dia mirakitra ireo fitaovam-pifandraisana roa samihafa.
Ny Xinxing dia manome ny vondron-drivotra feno fiakaran'ny rivotra, ny lozam-pifamoivoizana amin'ny rivotra, ny fiaramanidina, ny rivotra, ny biriky, ny lelafo, ny rivotra ary ny kitapo. Miaraka amin'ny teknolojia avo lenta sy ny mpiasa mafana fo, ny Xinxing dia manompo ny mpanjifany manerana izao tontolo izao, indrindra any UAS, Azia, Eoropa.
Manana toeram-pivarotana fitaovam-piaramanidina i Alemaina, nividy mofomamy i Taiwan, 80 ny milina fanodinana CNC, ny milina 4 Robot ny asa, ny karazana 15 mamaritra ny fiainana an-tsokosoko mba hanatsarana ny famokarana ary hanomezana kalitaon'ny mpanjifa. Ny fitaovam-piasanay lehibe indrindra dia ampiasaina ny fitaovana enti-mampiditra ny loha-lava lava be.
Mba hanampiana ireo mpanjifantsika hampitombo ny vokatra vokariny, hampihenana ny fandaniana amin'ny fitrandrahana, ary hanatsara ny fiarovana amin'ny mpiasa mifandraika amin'ny fampiasana sy fikarakarana fitaovana pneoma.
Farany, inoantsika fa ny safidy fitaovana mety tsara dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny kalitao amin'ny asanao ary hiezaka hanome ny fitaovam-pitaovantsika tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika isika dia ny misiônerantsika.